Tetikasa famotsiam-bokatra Arabo any Egypt - Blog Ellicott Dredges
Ny Arab Contractors Co dia mampiasa ny Dredges Brand Ellicott® hihaonana amin'ny fangatahana dredging-ny
Jona 3, 2014
Ny lehibe indrindra amin'ireo tetik'asa misy azy ankehitriny dia ny East Port-Said Axial Port. Ny famolavolana sy ny fananganana seranan-tsambo vaovao any atsinanan'i Port Said By-pass dia hifanaraka amin'ny fangatahana fitaterana an-dranomasina. Ny dingana iray amin'ny tetikasa dia ahitana ny fananganana fantsom-pifandraisana, koveta mihodina, koveta beralah, fantsona fohy ary fanitarana ny Port Said By-Pass. Ny tara dia noraisina tamin'ny faran'ny 1998 ary ny loka no andrasana amin'ny faran'ny taona.
Ny XnUMXM m100 no nomanina ho fanodinana natao. Ny faritra dia manodidina ny 3 km20. Izany no antony maha-zava-dehibe ny East Port hanampiana ny fanondranana entana satria faritra lehibe amin'ny indostria sy fambolena no haorina ho fanampin'ny mpiompy an'arivony ao amin'ny fantsona Elsalam. Ny seranan-tsambo dia haorina ao amin'ny 2 feddan (4,500 ac.), Ary izany dia mila 4,669 feddan (15,000 ac.) Tetikasa indostria, fivarotana ary faritra maimaimpoana. Ny seranan-tsambo vaovao dia tokony mandray sy manompo ireo fivoarana rehetra ireo.
Ity no iray amin'ireo laharam-pahamehana nasionaly voalohany manohana ny toekarem-pirenena Ejipsiana toy izao manaraka izao:
• Ny mahasarika ny varotra fitrandrahana ao amin'ny Mediterane izay mitentina $ 6M / yr mitombo 8.0% isan-taona.
• Fanompoana ny zotra indostrialy sy malalaka ara-barotra.
• Ny fanadihadiana azo atao rehetra dia nahitana fa ity seranana ity dia hisarika ny 3.0 M TEU miandalana hatramin'ny taona 2010.
Ny dingana voalohany dia hahatafiditra tranobe misy lavarangana 2,150 m ny halavany ary manadoka dock hatramin'ny 17m ny halaliny. Ny terminal dia hanana 1.5M, 20-ft mitovy unit (TEU's) isan-taona amin'ny dingana voalohany. Miakatra hatramin'ny 3.0M TEU isan-taona amin'ny dingana faharoa.
Tombanana ho an'ny 40M m3 ny dredging. Mikasika ny Faritr'i Suez Avaratra, ity seranan-tsambo vaovao ity dia hanompo faritra lehibe amin'ny orinasa indostrialy ka ilaina ny fampandrosoana ary zava-dehibe ny serasera. Golfa Avaratra Avaratra dia mendrika handray soa avy amin'ny toerany sy ny zava-misy ary tokony ho afaka hanitatra sy hifampiresaka.
Ny Governemanta Repoblika Arabo any Ejipta dia nanomboka ny fampandrosoana, ny famolavolana ary ny fananganana seranan-tsambo vaovao any avaratry Alsukhna ao amin'ny helodranon'i Suez ahafahana manatanteraka ny fangatahana fitaterana an-dranomasina.
Ny andiany iray amin'ireo tetik'asa dia ahitana ny fananganana tohodrano 750 m-length (misy rindrina quay roa), fantsona fidirana, fihodinana ary fihodinana. Ny faritra natokana ho an'ny dingana voalohany dia avaratra amin'ny faritry ny tetikasa izay misy ny 5-km halavany avy any Suez. Alsukhna làlana lehibe mankany amin'ny morontsiraky ny Hoalan'ny sy ny sakany tokony ho 2km, manaraka ny sisin'ny atsimo amin'ny Sky Hawk Touristic Village.
Ireo mpandraharaha arabo dia nanambara ny fifanarahana hananganana «Dragon» marika Ellicott®®”Dredge any Egypt
Ellicott® Dredges (Baltimore, MD USA), ilay mpanamboatra «dredges suction cutter» tranainy indrindra sy lehibe indrindra manerantany, dia nanambara fifanarahana nifanaovana tamina Fifanekena Arabo (Kairo, Egypt) hananganana andian-tsarimihetsika “Series” 1870®”Dredge tany Egypt nahazo alalana.
Fifanekena Arabo, orinasam-pananganana lehibe indrindra any Moyen-Orient, mitarika asa fanamboarana mitentina US $ 1.5B isan-taona. Navitrika tamin'ny dredging nandritra ny 30 taona mahery izy ary mampiasa Ellicott® ny dredges marika irery.
Ilay Series vaovao 1870 “Dragon®”Hatao dredge ao amin'ny sambo mpiasan'ny Arab Contractors any Ismailia mampiasa Ellicott® famolavolana marika sy milina. Ny hery dia avy any Caterpillar motera nomen'ny mpivarotra CAT's Egypt, Mantrac. Miaraka amin'ny 1755 hp (1.309kw) mahery, ny Ellicott® ny dredge dia ho afaka hanompa fasika avy amin'ny halalin'ny 50ft (15.2m). Mitentina mihoatra ny iray tapitrisa dolara ny dredge.
Ny dredge dia ampiasaina amin'ny famatsiana fitaovana ho an'ny làlambe iraisampirenena vaovao manompo an'i Port Said City, ary ho an'ny fitrandrahana tany ao amin'io faritra io ihany. Ny mpifaninana Arabo dia manana fifanarahana $ 10M miaraka amin'ny governemanta Ejiptiana izay mitaky ny fampiasana ireo Ellicott maro® ny kamiao marika amin'ny fivarotany. Ireo sanganasa ireo dia hiasa amin'ny tetikasa maromaro asongadin'ny federasiona mpampiasa vola any Kairo izay tohanan'ny US Trade and Development Agency.
Nandray anjara tamin'ny tetikasa manaraka ireto ny Arab Contractors Co:
- Fivoarana ny reniranon'i Neily ao Luxer, eo ambanin'ny minisiteran'ny fanondrahana. Tombanana ho 6.0 tapitrisa m3 ny fandavahana, fanadiovana ary fanarian-drano any amin'ny haavo –4 ho an'ny làlana fitetezana ny renirano.
- Toeram-pitrandrahana herinaratra any Oyoan Mousa, minisiteran'ny herinaratra 3.3 tapitrisa m3, anisany ny fitrandrahana ny fantsona fidirana sy fivoahana ho an'ny tobin-jiro amin'ny fasika sy vatolampy sasany.
- Dingana faharoa amin'ny làlambe misy an'i Ring Said, Governemanta any Port Said. Fandehanana amin'ny farihy Manzalah hamita ny fanamboarana lalambe vaovao manomboka any Ras el Ash ka hatrany Doneletta City.
Navoaka indray avy amin'ny fanamboarana dredging & harena ankibon'ny tany manerantany